MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardPayment mptpay MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ငွေတောင်းခံလွှာများကို MPT Pay ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
Postpaid နှင့် FTTH ၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအားလုံး၏ လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် ကနဦ: ငွေတောင်းခံလွှာများအား MPT Pay ကိုအသုံးပြုပြီး ငွေပေးဆောင်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ဖြင့် မည်သည့် လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသလဲ ?
MPT Pay ဖြင့် ငွေပေးချေလျှင် အားသားချက်တွေက ဘာလဲ?
MPT Pay အပလီကေးရှင်းအသုံးပြုပြီး Postpaid လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် OTI ငွေတောင်းခံလွှာများကို လွယ်ကူစွာပေးချေနိုင်ပါသည်။
MPT Pay agent သို့မဟုတ် MPT Pay user အကောင့်များမှ Postpaid လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် OTI ငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် ငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီ: လွယ်ကူလျင်မြန်စေသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
MPT Pay အကောင့် ဘယ်လိုလျှောက်ထားရမလဲ?
MPT, Telenor, Ooredoo နှင့် MyTel မည်သည့် ဆင်းကဒ်သုံးစွဲသူမဆို MPT Pay ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးကတော့အခမဲ့ပါ။
အသေးစိတ်ကို https://www.mptmoney.com.mm/ တွင်၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
MPT Pay စာရင်းပေးသွင်းရန်လမ်းညွှန် >>>>>Click here